Pandaw Cruises Hadda Waxay u Xidhan tahay Meherad Wanaag Sababo la xiriira COVID-19
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » saaciday inay » Pandaw Cruises Hadda Waxay u Xidhan tahay Meherad Wanaag Sababo la xiriira COVID-19
Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Cambodia Breaking News • saaciday inay • Warshadaha Warshadaha • Wararka Hindiya • Wararka Laos • News • Dalxiiska • Gaadiidka • Warka Safarka Safarka • Wararka Jabinta Vietnam
Nabad gelyo Pandaw Cruises
Pandaw wuxuu ku dhawaaqay maanta, Oktoobar 26, 2021, in saameynta joogtada ah ee COVID-19 ee safarka madadaalada caalamiga ah awgeed, ay tahay inay albaabada u xirto.
Goobaha loogu adeegi jiray safarka dalxiiska ee Vietnam, Cambodia, Laos, iyo India ayaa joogsaday.
Xaaladda siyaasadeed ee halista ah ee Myanmar ayaa sidoo kale gacan ka geysatay xiritaanka.
Shirkaddu ma haysato wax kale oo aan ahayn inay joojiso hawlaheeda socdaalka webiga sababtuna tahay dhaqaale la'aanta dhaqaale iyo ku guul darradu inay hesho maalgelin dheeraad ah ka dib dhibaatada COVID-19.
In kasta oo ballan-qaadyada hore ee dib-u-bilaabashada 2022 ay sii xooggan tahay, iyada oo taageero weyn laga helayo bulshada weligeed daacadda u ah Pandaw, shirkaddu waxa ay ka maqan tahay maalgelinta ay ku sii waddo hawlgallada diyaarinta maraakiibtooda toddoba iyo tobanka ah sannad kale, ka dibna ay maraan dib-u-habayn lagama maarmaan ah si loogu diyaargaroobo hawlgallada dib loo cusboonaysiiyay. Waqtiga kaas oo ah mid aan la hubin, xitaa haddii loo maleynayo inay tani dhici karto xilliga qaboobaha 2022/23.
Shirkaddu si aan daalin ayay u shaqeysay sanadkii la soo dhaafay si ay u hesho maalgashadayaal cusub ama qaabab kale oo maaliyadeed oo ay ku socodsiiso shirkadda, laakiin kuma guuleysan.
Waxaa la aasaasay 1995-kii, Pandaw waxa uu hormood ka noqday socdaallada webiga ee Vietnam, Cambodia, Laos, Myanmar, iyo Hindiya oo wata maraakiibteeda caanka ah. Ilaa saamaynta COVID, Pandaw waxa uu ku raaxaysanayay taageerada daacada ah ee raacaya dadka safarka ah, deganaanshaha sare, iyo dakhliga sanadlaha ah ee koraya oo leh natiijooyin dhaqaale oo togan.
Aasaasaha Pandaw Paul Strachan ayaa faallo ka bixiyay: “Tani waa waqti murugo badan aniga, qoyskayga, shaqaalahayaga, iyo macaamiishayada. Dhammaanteen waxay astaan ​​u tahay dhammaadka waaga ka dib 25 sano oo tacab dhab ah. Runtii aad ayaan uga xunahay inaan niyad jabno rakaabkayaga joogtada ah ee aadka u rajaynayay inay safar sameeyaan ka dib qaadista xayiraadaha safarka. Waxa kale oo aanu ka niyad jabnay 300+ shaqaalahayaga ah iyo shaqaalaha xeebta ee garab istaagay Pandaw oo rajaynayay inay mar kale tagaan sanadka soo socda.
Inkastoo la xiray Pandaw Cruises, Pandaw Charity, taas oo wax badan ka qabatay in ay taageerto dadka Myanmar inta lagu guda jiro qalalaasaha socda halkaas, ay ku sii wadi doonto shaqadeeda iyadoo ay hagayaan wakiiladeeda.
Duulimaadyada Bariga Dhexe ayaa noqday Airbus Skywise Health...
Laba qof ayaa lagu dilay goobta loo dalxiis tago ee Hyatt Ziva Riviera Cancun...
Hindiya waxay ku biirtay Shiinaha inay mamnuucday dhammaan kuwa gaarka ah ...
Bahamas waxay ku dhawaaqday ka-qaybgalkeeda WTM London...
Turkish Airlines iyo Belavia ma sii duuli doonaan Ciraaq
Qorshaha Cusub ee Caalamiga ah ee Tobanka Sano ee Ficil ee Badbaadada Wadooyinka
Kingston Jamaica Hadda waxay ku jirtaa liiska Fasaxa ugu sarreeya 2022
Dalxiiska Jamaica: Badbaadada iyo Caafimaadka Spa ee buug-gacmeedka cusub
FAA waxay ku qasabtaa Verizon iyo AT&T inay joojiyaan 5G buuxa
Kooxda CMA CGM waxay iibsatay afar diyaaradood oo Airbus A350F cusub ah